Iyo nyowani system yeMac ichadaidzwa kuti macOS High Sierra | Ndinobva mac
Iyo nyowani Mac system ichadaidzwa kuti macOS High Sierra
Apple ichangobva kuzivisa zvine musoro kushanduka kweinoshanda system. Chaizvoizvo operating system, inonzi macOS Sierra icha shanduka ikaita nyowani uye yakanatswa macOS High Sierra Uye ndezvekuti maererano nezvavari kutiudza muKeynote, ichave iri sisitimu isingazoshanduke zvakanyanya maererano nedhizaini, asi zvinhu zvakawanda zvichashandurwa izvo zvinoita kuti ive sisitimu ine simba.
Craig haamire kutaura kuti inguva yekukwanisa iyo inoshanda system uye ndosaka vafunga kuti zita idzva rakabatana zvakanyanya neyaive yatovepo.
Apple ine mupfungwa kuti iyo nyowani vhezheni yeMac system iyi vhezheni yakazadzwa nehunyanzvi uye hwakadzama hwesainzi shanduko dzinozokanganisa Mac kamwe zvakare kumusoro kwe "gomo", hazvina kumbotaurwa nani.
Zvimwe zvinhu zviri kuzoitwa mushanduro iyi nyowani yehurongwa hwekushandisa zvakakurumidza kutumidzwa zita, pakati pazvo zvatinogona kunongedza shanduko muMeyili sezvo iko zvino ichitsigira Split View kunyora email, mukuwedzera, ikozvino 35% shoma ichave yakashandisa nzvimbo yekuchengetedza email paMac yako.
Nekudaro, chimwe chezvinhu chichavandudza zvakanyanya zvese zviri zviviri iyo safari app inozova inokurumidza browser nguva dzose uye iyo Mifananidzo app. Mumifananidzo tichava nemasefa matsva ekuti titore mafoto nekukurumidza, kuvandudzwa pakuonekwa kwechiso uye ichaenderana ipapo neese madhizaini.
Ikozvino, runako pakeke rwunotorwa neiyo nyowani faira system iyo ino nyowani system ichave nayo. Iyo HFS faira system yaive yekare kwazvo faira system, saka neiyo nyowani macOS ichauya iyo Apple File System, iyo faira system iyo inobvumidza iwe kuti uite zviito kusvika katatu katatu nekukurumidza.
Semhedzisiro yekuvandudzwa kwefaira system kunouya kuvandudzwa mukutungamira kwemavhidhiyo muhurongwa, neMacOS High Sierra ichisvika new compression standard, iyo H.265. Pasina kupokana, dzakateedzana shanduko dzatichazokurukura zvakadzama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Iyo nyowani Mac system ichadaidzwa kuti macOS High Sierra
WatchOS 4 yakaunzwa: zvimwe zviziviso uye kugadzirisa mune wega mudzidzisi
tvOS inogadziridzwa uye iyo app yeAmazon inosimbiswa